बुद्धले कति कक्षा पास गरेका थिए? ~ FMS News Info
बुद्धले कति कक्षा पास गरेका थिए?
शैक्षिक योग्यता खोज्नेलाई ओलीको प्रश्‍न
काठमाडौं: एमाले अध्यक्ष केपी ओली सधैंभन्दा भिन्न मुढमा थिए। बुधबार दिउँसो उनी मुस्कुराउँदै प्रज्ञाभवन कामलादी प्रवेश गरे। कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेला उनी आसनमा बसे। केही वक्ताको भाषणसमेत रोचक मुडमा सुने उनले। कार्यक्रम थियो उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको ‘म महेश’ पुस्तक बिमोचन।
कार्यक्रमको अन्तिममा ओलीले ४५ मिनेट भाषण गरे। तर त्यो राजनीतिक भाषण थिएन। उनले ऋषिमुनी, जडीबुटीका, तपोभूमिका र बुद्धका बारेमा प्रबचन दिए झैं सुनाए। ‘संविधानको मस्यौदामा नेताहरु यति पढेको र उति पढेको भन्ने पनि चर्चा आयो, म प्रश्न गर्छु-बुद्धले कति कक्षा पास गरेका थिए? ‘ ओली आफैले जवाफ पनि दिए, ‘उनी साक्षर पनि थिएनन् तर उनका नाममा आज कतिले पीएचडी गरेका छन्?’
ओलीले नेपाल ज्ञान र तपोवनको खानी भएको पनि बताए। ‘ऋषिहरु काशीबाट, गयाजीबाट, बंगालको खाडीबाट नेपाल आउँथे अनि ज्ञान प्राप्त गरेर फर्किन्थे,’ ओलीले भने। नेपाल ज्ञानभूमि र तपोभूमि रहेको स्पष्ट पार्दै उनले नेपाली माटो नै बिशेष भएको बताए।
‘अरु देशमा चार लाइन कविता लेख्ने आँशुकवि हुन्छ, हाम्रोमा त गाई हेर्न जाने गोठला दोहोरी खेलेर सधै आँशुकवि हुन्छन्,’ ओलीले भने, ‘यहाँ लेखे कथा बन्छ, भने कविता बन्छ, बोले गीत बन्छ।’ मञ्चमा रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमतर्फ लक्षित गर्दै ओली भने, ‘तपाईं पनि महेश बस्नेतको किताब बिमोचनमा आएर ताली मात्र बजाउने होइन भरेदेखि कलम कापी लिएर लेख्न बस्नुस्।’
ओलीले नेपाली गुगल ब्वाई भनेर चिनिने आदित्य दाहाल र झलनाथ खनालको सन्दर्भ पनि यसरी निकाले, ‘आदित्यको कुरा सुनेर झलनाथजी पनि त्यहाँ जानु भएछ, अनि उसलाई सोध्नु भएछ-मेरी हजुरआमाको नाम के हो? आदित्यले नाम लेखिदिएपछि झलननाथ तीनचित पर्नु भएछ, उहाँलाई पनि हजुरआमाको नाम थाहा रहेनछ अनि घरमा फोन गरेर सोध्दा त उही नाम रहेछ।’ ओलीले थपे, ‘शिवजी डमरु बजाएर आएका हुन कि के हो ? जे भए पनि उनले पनि नेपाल नै रोजे।’
ओलीले नेपालीहरु सूचना प्रविधिमा समेत अगाडि रहेको बताए। ‘मोबाइल सेट आइपुगिसकेको हुँदैन यहाँ चलाउन जान्ने धेरै हुन्छन्।’ फेरी गौतमतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, ‘मोबाइल सेट बामदेवजीको खल्तीमा हुन्छ, उहाँको नातिनीसँग हुँदैन तर एक छिन फेला पारे उहाँलाई सिकाइदिन्छिन्।’
उनले उद्योग मन्त्री महेशको समेत तारिफ गरे। उनले भने, ‘युथफोर्स गठन गरेर परेड खेल्दा अलिअलि बुटको आवाज आयो भनेर गुनासो पनि गरे। परेड खेल्दा त बुटको आवाज आइहाल्छ नि, त्यो त क्याटवाक गरेको होइन नि।’
‘आगो लागेको ठाउँमा दमकल बन’
काठमाडौं: एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ६ प्रदेशसहितको संघीय राज्य र सीमांकन उपयुक्त रहेको जिकिर गरेका छन्।
संविधानसभा भवनमा एमालेका मध्य तथा पूर्वीजिल्लाका सभासद्सँगको बैठकमा ओलीले संविधान सहमतिको दस्ताबेज भएकाले त्यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्न सुझाव दिए। उनले भने, ‘६ प्रदेशसहितको संघीय राज्य अहिलेको अवस्थामा जायज छ। यो एमालेको मात्र होइन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र नगर्ने सबै दलको साझा दस्ताबेज पनि हो।’
संविधानका विषयमा उठको जायज मुद्दा सम्बोधन गर्न एमाले तयार रहेको ओलीले बताए।परिमार्जित मस्यौदा सहमतिको दस्ताबेज भए पनि तर्कपूर्ण र औचित्यपूर्ण माग समेट्न प्रयास गरिने जानकारी ओलीले सभासद्लाई गराएका थिए।
आवेग र उत्तेजनामा अहिले भइरहेका आन्दोलन ठीक नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशलाई लिएर जसरी आगो बाल्न खोजिएको छ, त्यसका लागि एमाले शान्तिपूर्ण दमकल बन्न तयार हुनुपर्छ। आगो चर्काउन खोजको ठाउँमा तपाईंहरूले लेप लाउनुपर्छ।’
क्षेत्रीय र जातीय रूपमा नभई दलहरूले विकास र न्यायका लागि ६ प्रदेशको खाका तयार पारेको ओलीको भनाइ थियो । परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि सबैको माग सम्बोधन हुन नसक्ने उनले बताए।
‘खेत रोप्नुपरेको छ। कसैले पानी पारिदेऊ भन्छन्। खेत रोप्न त्यो माग जायज नै हो, बिस्कुन सुकाउनेले घाम लगाइदेऊ भन्छन् त्यो माग पनि जायज नै हो तर त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने अहिलेको चुनौती हो’, उनले भने।
मुलुकभर विभिन्‍न पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुनु स्वाभाविकै रहेको उनले बताए।एमालेका थारू र मधेसी सभासद्ले ओलीप्रति खनिँदै भने, ‘अल्पसंख्यक जाति तथा समुदायलाई अधिकार नदिइएको, सीमा निर्धारणमासमेत ध्यान नगएको, आफूहरू र मतदाताबीच द्वन्द्व हुँदा मध्यपश्चिममा आगो बाल्ने काम भयो।’
ओलीले तत्कालै ती सभासद्को भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘आगो बाल्छौं भन्‍नेबीच दमकल लिएर जानुपर्‍यो।चर्काउँछु भन्नेलाई लेपन लगाएर टाल्नुपर्‍यो।’